“Waxa ku dhacay Real Madrid waa suuragal inay nagu dhacaan” – Valverde – Gool FM
“Waxa ku dhacay Real Madrid waa suuragal inay nagu dhacaan” – Valverde
(Yurub) 07 Maarso 2019. Macalinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa xaqiijiyay in wixii ku dhacay Real Madrid isbuucan, inay ku dhici karaan kooxda reer Catalonia ee Barcelona isbuuca soo socda.
Kooxda reer Catalonia ee Barcelona ayaa isbuuca soo aadan ku soo dhaweyn doonto kooxda Lyon garoonkeeda Cump Nou, si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta labaad wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Real Madrid ayaa ku macsalaameysay si fool xumo ah tartanka Champions League, kadib markii ay guuldaro 4-1 ah kala kulmeen kooxda reer Holand ee Ajax Amsterdam.
Hadaba tababare Ernesto Valverde ayaa muujiyay sida uu kaga walwalsan yahay ciyaarta soo aadan ay kooxda Lyon kula ciyaari doonaan garoonka Cump Nou wuxuuna yiri:
“Ilaa iyo haatan ma aanan u gudbin wareega xiga ee siddeed dhamaadka tartanka Champions League, laakiin waxa ku dhacay Real Madrid waa suuragal inay nagu dhacaan”.
“Xitaa hadii aan heysano fursada ah inaan ku ciyaari doono garoonkeena Cump Nou, laakiin waxaa hubaal ah in maalin xun ay kaaga soo bixi karto tartanka Champions League”.
Neymar oo si kulul u weeraray garsoorayaasha, kadib markii ay xalay PSG ka hartay tartanka Champions League
Neymar oo taageero wayn ka helay labo Halyeey oo soo maray Man United kaddib markii uu si xun u weeraray Garsoorayaasha kulankii Xalay